चैत २६ गतेः ५ नम्बर प्रदेश हेडलाइन, कहाँ के भयो ? | Ratopati
चैत २६ गतेः ५ नम्बर प्रदेश हेडलाइन, कहाँ के भयो ?
personरातोपाटी संवाददाता exploreरुपन्देही access_timeचैत २६, २०७५ chat_bubble_outline0
अस्पतालमा बालकको मृत्यु प्रकरणः आफन्तले शव बुझ्न मानेन्
रुपन्देहीको बुुटवलस्थित सिद्धार्थ महिला तथा बाल अस्पताल (आम्दा)मा उपचारको क्रममा बालकको मृत्यु भएपछि तनाव सिर्जना भएको छ ।
मृतकका आफन्तले अस्पतालको लापरबाहीका कारण बालकको मृत्यु भएको भन्दै मृत्यु भएको १८ घण्टा बितिसक्दा पनि शव बुझ्न मानेका छैनन् ।
सोमबार साँझ ७ बजे बुुटवल उपमहानगरपालिका–११ का नारायण दर्लामीका १० महिनाका छोरा ओमको मृत्युु भएको थियो ।
चिकित्सक समयमै उपचार गर्न नआउँदा बालकको मृत्युु भएको आफन्तले आरोप लगाउँदै क्षतिपुर्ति माग गरेका छन् । उनीहरुले उचित क्षतिपूर्ति र दोषी चिकित्सकलाई कारवाहीको माग पनि गरेका छन् ।
मृतकका बुबा नारायणले समयमा डाक्टर नआउँदा छोराको मृत्यु भएको दाबी गरे । उनले आम्दा अस्पतालमा यस्ता केशहरु पटक–पटक हुने भएकाले उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने माग गरे ।
अस्पताल पुर्याएको एक घण्टामै बालकको मृत्युु भएको थियो । अस्पतालका चिकित्सक डा. सन्तोष पोखरेलले वान्ता सर्केर मृत्युु भएको हुुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले बिरामीलाई आउने बित्तिकै सिरिन्जबाट औषधी दिएका थियौं । तर, निमोनिया भएको रहेछ । वान्ता गर्दा सर्केर मृत्यु भएको हुुन सक्छ ।’
परिवारका अनुसार ओम केही दिनदेखि बिरामी भएका थिए । रोगले च्याप्दै लगेपछि आइतबार बुुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएको थियो । अस्पतालले त्यहाँबाट भैरहवास्थित मेडिकल कलेज रिफर गरेको थियो । मेडिकल कलेजले फेरि बालकलाई अम्दामा रिफर गरेको थियो ।
प्रदेश नम्बर ५ मा २ विद्येयक पारित
प्रदेश नम्बर पाँचको आज बसेको बैठकले देशभर सरकारी डाक्टरहरुले गरेको आन्दोलनको बिषयमा चासो व्यक्त गरेको छ । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले चासो व्यक्त गरेका हुन् ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले डाक्टरहरूको बन्द हड्तालले बिरामी मर्कामा परेको भन्दै वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘डाक्टरहरूले उपचारलाई नैं प्रभावित हुने गरी हड्ताल गर्न पाइदैँन । यो अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने ऐन विपरित छ । डक्टरको बिरामीलाई समस्यामा पार्न पाइदैंन । सरकारको यसप्रति ध्यान पुगोस् ।’
त्यस्तै अर्का सांसद अमरबहादुर डाँगीले भूमि व्यवस्था आयोग गठन गरी भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न माग गरे । उनले भने, ‘२०१८÷१९ तिर विर्ता उन्मूलन भएको घोषणा गरियो । तर जग्गा दलालहरूको कारण अझैँ पनि दाङमा भूमि सम्बन्धी समस्या धेरै छ । आयोग गठन गरी जग्गाको समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।’
त्यस्तै अर्का सांसद मोहम्मद याकुव अन्सारीले नेपालको जडिबुटी निकासी रोकिएको भन्दै निकासीको व्यवस्थाको पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले सभामा पेश गरेको प्रदेश नम्बर ५ सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले पेश गरेको पेस गरेको प्रदेश नम्बर ५ प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित भएको हो ।
दुई विधेयक सभामा सभामुखले निणर्याथ प्रस्तुत गरेका थिए । पारित विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेपनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले छलफलमा सहभागिता जनाएनन् ।
अस्पताल ठप्प, विरामीलाई सास्ती
५ दिनदेखि पाँच नम्बर प्रदेशमा अस्पताल ठप्प हुँदा बिरामीले सास्ती पाएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनका कारण ५ दिनसम्म अस्पताल बन्द हुँदा झण्डै एक हजार बिरामी प्रभावित भएका छन् ।
अस्पताल नै बन्द गराएर आन्दोलन गरेपछि अस्पताल आउने बिरामीहरुले डाक्टरहरुको विरोध समेत गर्न थालेका छन् । अस्पतालजस्तो अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रमा बन्द–हड्ताल गर्न नपाउने नियमलाई चुनौती दिँदै डाक्टहरु भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
विप्लवका ४ कार्यकर्ताद्वारा आत्मसमर्पण
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि जिल्लामा हालसम्म चार कार्यकर्ताले आत्मसमर्पण गरेका छन् ।
‘विप्लव’ समूहमा रहेर गतिविधि गर्दै आएका उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पुगेर आत्मसमर्पण गरेका हुन् ।
आत्मसमर्पण गर्नेमा खजुरा गाउँपालिका–८, रनियापुरका ६६ वर्षीय चुन्ना खाँ, सल्यान घर भई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२ बस्ने डिल्लीबहादुर डिसी, कोहलपुर बस्ने रामजी कुँवर र रुकुम चौरजहारीका गगन खड्का रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
कागज गराएर छाडिए पनि उनीहरुको गतिविधिमाथि निगरानी गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताए ।
जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई एउटै स्थानमा राखिने
पूर्वी नवलपरासी जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई एउटै स्थानमा राखिने गरी सदरमुकाम कावासोतीमा कामको थालनी गरिएको छ ।
कावासोती–३ स्थित करिब १७९ बिगहा जग्गा क्षेत्रफलमा सबै सरकारी कार्यालयका भवन निमार्णका लागि कागजी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
पूर्वी नवलपरासीका सरकारी कार्यालय एउटै स्थानमा व्यवस्थापनका लागि कावासोतीमा कार्यालयको आगामी वैशाख ७ गते शिलन्यास गरिने कार्यक्रम तय भएको छ ।
शिलन्यासका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका अन्य संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका प्रमुख, मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्री आउने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ ।
सो कार्यक्रमलाई भव्यरुपमा सफल बनाउने तयारी भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख चेसराम आलेले जानकारी दिए ।
चिनियाँ भ्रमण सफल : मुख्यमन्त्री पोखरेल
अविरल वर्षाका कारण गुल्मीका विभिन्न सडक अवरुद्ध
लुम्बिनी अस्पतालमा ५ वटा शव अलपत्र
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नगरसभा सम्पन्न
बबई नदीमा वृद्ध बेपत्ता, बालकको शव फेला
जुवाको खालबाट ७ जना पक्राउ
पोखरामा ‘पेन गन’सहित लागुऔषध कारोबारी पक्राउ
भिसिटिएस प्रणालीप्रति उद्योगीहरु असन्तुष्ट
महोत्तरीमा खानेपानीको सङ्कट
अमेरिकामा एसएसपी जोशीलाई एनसीसीको सम्मान
शिल्पाको अमृतसँग ‘उनकै कुरा हुन्छ’
औपचारिक रुपमै शुरु भयो भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम
जेएनयूमा सुरक्षा गार्डको काम गर्दागर्दै जब निस्कियो नाम
सरकारद्वारा भिसिटिएस प्रणालीको शुभारम्भ
युरोपेली आयोगको अध्यक्षमा उर्सुला निर्वाचित